Onjanà “Bot” Miezaka Mampahatsiahy Ny Rosiana Ny Fotoana Mamy Tamin’ny Lalao Olaimpika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Febroary 2015 8:39 GMT
Ity manaraka ity dia fandikàna feno ho amin'ny teny Anglisy ny lahatsoratra iray an'i Vadim Yelistratov izay navoaka tamin'ny teny Rosiana tao amin'ny tranonkala TJ tamin'ny 7 Febroary 2015.
“Asa, Fanatanjahantena, ary Vladimir Putin,” nosoratan'i Vadim Yelistratov
Ny 7 Febroary, nankalaza ny faha-herintaonany ny lalao Olaimpika fanao amin'ny andro Ririnina tao Sochi. Tena 12 volana katroka mihitsy tany aloha no nanombohan'ny iray tamin'ireo hetsika ara-panatanjahantena goavana indrindra tao Rosia. Marobe ireo Rosiana no niaina ny firongatry ny fitiavana tanindrazana nandritry ny Lalao (Nahazo ny anjara medaliny i Rosia, sady tsara karakara tokoa ny lanonana) ary nantenain-dry zareo fa ny fampiantranoana ny lalao dia hanatsara ny lazan'ny firenena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Na izany aza, amin'izao Febroary 2015 izao, ao anaty krizy ara-toekarena i Rosia, ary tonga amin'ny fetra maha-ratsy azy ny fifandraisany amin'i Etazonia sy Eoropa. Ary saika noho izany indrindra, misy ny ezaka iraisana alefa amin'ireo onjampeo rehetra mba hampahatsiarovana ny Rosiana ny momba ny tsingerintaonan'ny fandresen'ny firenena tamin'ny Lalao Olaimpika.
Sarihan'ny TJournal ny saina mba ho any amin'ireo andianà bitsika mitovitovy, nalefa tamin'ny 7 Febroary, “nosoratan” ny “bots” (rindrambaiko informatika mibaiko tena) mikasika ny tsingerintaonan'ny Lalao Olaimpika.
Ny sasany amin'ireny bitsika natao dika maro ireny no nifantoka fotsiny tamin'ny fampahatsiahivana ireo mpamaky ny momba ny tsingerintaonan'ny Lalao Olaimpika. Nisy endrika vitsivitsy tamin'ity hafatra ity, izay mamerina ireo lohateny lehibe tamin'ny vaovao.
Henjana. Fandriampahalemana, asa, fanatanjahantena, Vladimir Putin … Lalao Olaimpika!
Ny Lalao Olaimpika tao Sochi. Taona iray aty aoriana.
Rosia: izay izany, vita ny ahy. Ny Lalao Olaimpika! Resintsika daholo ny rehetra! Hooraaaay!
Herintaona katroka lasa izany, tao Sochi, nanomboka ny lalao Olaimpika.
Ny lalao Olaimpika tao Sochi: taona iray aty aoriana. Tsaroan'i Rosia androany ny Lalao Olaimpika…
Fijoroana Vavolombelona manokana
Ny bitsika sasany kosa niezaka nivarotra ny Lalao Olaimpika toy ny hoe hetsika manokan'ny tenany teo amin'ny fiainan'ny Rosiana tsirairay.
Ny Lalao Olaimpika. Araka izay niainako azy.
Anio no #taonaIrayTaorianLalaoOlaimpika. Ho ao ampoko mandrakariva ny Lalao Olaimpika.
Voninahitry Ny Rosiana
Ny betsaka amin'ireny bitsika nalefan'ny “bots” ireny no manindry fa hoe “fahombiazam-pirenena” ho an'i Rosia ny Lalao Olaimpika izay nitondra “fiantraika miabo tamin'ny sary omena azy”
lalao Olaimpika tao Sochi : taona iray ho an'ny fahombiazan'ny firenentsika 33/13 [ny “33/13” dia midika isan'ny medaly azon'ny Rosiana (volamena sy volafotsy).]
Tena narahako maso tsara mihitsy fony aho nijery. 🙂 Hetsika goavana be nisy fiantraikany miabo tamin'ny sary ahafantarana ny firenena ny Lalao Olaimpika.
Tena mavitrika nefa tsy misy filazàna ny loharano nakany azy, nalefany ireo lohateny vaventy avy aminà lahatsoratra navoaka tao amin'ny The Russian Times sy ny RBC, namoaka valim-pitsapankevitra nataon'ny masoivoho Romir, Gallup International, ary ny VTsIOM.
Fitsapankevitra: Nahafaly ny Rosiana ny raharaha Krimea sy ny Lalao Olaimpika.
49 isanjato amin'ny Rosiana no resy lahatra fa nampitombo ny voninahitr'i Rosia ny Lalao Olaimpika.
Fitanisàna avy amin'i Putin sy ireo Atleta hafa manana haavo iraisam-pirenena
Matetika ireo kaonty “bots” no mamerina ireo fanambaràna mandokandoka avy amin'i Vladimir Putin, ilay in-telo efa tompondaka erantany tamin'ny fikorisàna amin'ny Skate Irina Rodnina, Vitaly Mutko Minisitry ny Fanatanjahantena, ary ny Filohan'ny Kaomity Rosiana Momba ny Lalao Olaimpika Alexander Zhukov.
Vitaly Mutko: Lalàna lavitra ezaka niafàra tamin'ny zava-mahafinaritra ny Lalao Olaimpika tao Sochi
Putin: niteraka fipoahana fihetsehampo miabo ny Lalao Olaimpika tao Sochi.
Rodnina: Nasehon'ny Lalao Olaimpika tao Sochi fa vitan'i Rosia ny miatrika fanamby, na inona izany na inona.
United Russia: Fetisov: Lanonana ho an'ny firenena manontolo ny Lalao Olaimpika tao Sochi.
Zhukov: nanosika ny firoboroboan'ny fanatanjahantena tao Rosia ny Lalao Olaimpika tao Sochi.
Ny vidin-javatra lafo
Nony farany, ny iray tamin'ireo hafatra nobitsihana no nahazendana fa niezaka ny nanamaivana ny masom-bola nolaniana tamin'ireo Lalao Olaimpika, tamin'ny famerenany ny kajin'ny fandaniana, niainga avy amin'ny vola robla nihen-danja.
Rehefa averinao kajiana amin'ny vola Robla amin'izao fotoana izao ny fandaniana tamin'iny, dia toa tsy nandany vola be toy inona ireo Lalao Olaimpika tao Sochi…
Ny fampahalalam-baovao Rosiana
Ny ankamaroan'ny mpampahalala vaovao Rosiana koa dia nitatitra momba ny tsingerintaonan'ny Lalao Olaimpika tamin'ny endriny miabo tsy misy fangarony, tsy niteny mihitsy zavatra mikasika ny krizy ara-toekarena naterany ho an'ny firenena. Tamin'ireo gazety goavana, ny hany mba namoaka zavatra mifanohitra momba ilay hetsika tamin'izany fotoana izany dia ny Argumenty i Fakty.